लालटिन महोत्सव--元宵节 - China Radio International
(GMT+08:00) 2016-02-28 15:34:46
"साताको चर्चित शब्द"मा हरेक हप्ता चिनियाँ वा नेपाली संचार माध्यम र समाजमा सबैभन्दा धेरै छलफल भएको शब्द र समाचारलाई जानकारी गराइनेछ। आजको कार्यक्रममा यस हप्ताको चर्चित शब्द जसबारे धेरै चर्चा भएको छ, त्यसबारे जानकारी दिने छु।
यस हप्ताको शब्द बढी चर्चित शब्द लालटिन महोत्सवसँग सम्बन्धित रहेको छ। चिनियाँमा यो शब्दलाई युआन स्याउ चाड भनिएको छ। फेब्रुअरी बाईस तारिख चीनको परम्परागत चाड लालटिन महोत्सव परेको थियो। यो चाड चीनको सबैभन्दा ठूलो बसन्त चाडपछि पहिलो महत्वपूर्ण चाड हो। चिनियाँ परम्परागत पात्रोमा पहिलो महिनाको पन्धौं दिन यस वर्षको पहिलो पूर्णिमा भएकोले जनताहरु यस पर्वलाई मनाउने गर्दछन्।
लालटिन महोत्सव पनि चीनको तिहार पर्व हो। किनभने प्राचीन चीनमा लालटिन महोत्सवमा मानिसहरुले धेरै किसिमका लालटिन बत्ती बनाएर आफ्नो घरमा टाँग्ने चलन छ। अहिले चिनियाँहरु लालटिन बत्ती त बनाउने गर्दैनन् तर बजार चोकमा लालटिन बत्तीको उज्यालो हेर्ने गर्दछन्।
लालटिन महोत्सवमा बत्तीहरुको तमासा पनि राखिएको हुन्छ। चिनियाँहरु बत्तीलाई हेर्दा पनि रमाइलो अनुभव गर्दछन्। अहिले म तपाईंलाई एउटा रमाइलो तमासा हुने खालको कुरा दिन्छु। त्यो के चीज हो जुन निरन्तर आफ्नै गतिमा दगुरिरहेको छ? तपाइँ अनुमान लगाउँदै गर्नुहोस्, म भने एकैछिन मिठो गीत सुनाउँछु। त्यस्को उत्तर के हो, पत्ता लगाउनुभयो?
छैन भने केही छैन। थाहा पाउनुभयो भने ठीकै छ। हो साँच्चै समय हो। यो तपाइँहामीले चाहेर पनि रोक्न सक्दैनौ, यो आफ्नै गतिमा दौडिरहेको छ।
लालटिन महोत्सवमा चिनियाँहरु एउटा परम्परागत खाजा खाने गर्दछन्। यो खाजालाई चिनियाँमा युआन स्याउ भनिन्छ। लालटिन महोत्सवको नाम पनि यस खाजाबाट राखिएको हो, त्यसैले यस चाडमा चिनियाँहरु सबैले युआन स्याउ खाने गर्दछन्। युआन स्याउको बाहिरी भाग एक किसिमको चामलबाट बनाइएको हुन्छ, त्यसभित्र मासु वा रातो सिमी पनि राखिएको हुन्छ। दक्षिण चीनमा युआन स्याउमा मासु राख्ने चलन छ तर उत्तर चीनमा रातो सिमी जस्तै मीठो खानेकुरा मात्र राख्ने चलन छ।
किन लालटिन महोत्सवमा चिनियाँहरुलाई युआन स्याउ महत्वपूर्ण लाग्छ？किनभने युआन स्याउ पूर्णिमा जस्तै गोलो छ। पूर्णिमा र गोलो युआन स्याउले चिनियाँहरुका परिवारमा सबै भेला भएर स्वस्थ र सुखी रहने भन्ने प्रतीक रहेको छ।
यस वर्षको लालटिन महोत्सवमा चीनका राष्ट्राध्यक्ष सी चिन फिङ्गले पनि जन दैनिक समाचार पत्रको वेबसाइटबाट लालटिन महोत्सवको शुभकामना दिनुभएको छ। उहाँले भन्नभयो ：सबैमा नमस्कार, चिनियाँ परम्परागत चाड लालटिन महोत्सवको उपलक्ष्यमा मैले सबैलाई महोत्सवको बधाई दिंदै छु र सबैको काम राम्ररी सफल हुने तथा सबै स्वस्थ रहने मेरो आशा छ।